Ciidanka booliska Soomaaliya oo soo xir xiray dhalinyaro isku abaabushay koox koox.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidanka booliska Soomaaliya oo soo xir xiray dhalinyaro isku abaabushay koox koox..
Ciidanka booliska Soomaaliya oo soo xir xiray dhalinyaro isku abaabushay koox koox..
Wararka ka imaanaya degmada Karaan gaar ahaan xaafada Jamhuuriya ayaa sheegaya in Ciidanka booliska Soomaaliya ay Howlgalo ka Sameeyeen halkaas ay ku soo qab qabteen ku dhowaad 150 dhalinyaro rag ah.
Wararka ayaa sheegaya in dhalinyaradaan ay isku abaabuleen Koox koox, kadib markii ay isku dagaaleen Garoonka lagu cayaaro Banooniga ee Salaxa, taasina ay keentay in ay u kala baxaan laba koox oo habeen kasta is tuuryeeya.
Dhibkaan ayaa waxa uu ka jiraa Xaafada Jamhuuriya waxaana la sheegay in uu soo taagnaa muddo ku dhow 60 cesho. Dhalinyarada ku nool xaafada Jamhuuriye ee degmada Kaaraan oo isku heesta Garoon kubada cagta ah ayaa u kala baxay laba koox, waxeyna billaabeen in ay ku dagaalamaan Weero ama tuuryo oo loo adeegsanayo dhagxaan lagu soo xiray xariga (waraf).
Previous articleMusharaxiinta oo qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiiro arrimo dibadeedyada u diray qoraal.
Next articleCiidamada Gorgor ee Kumandooska oo lagu soo tababaray dalka Turkiga oo dalka ku soo laabtay
Waxaan tiiraanyada iyo xanuunka geerida Alle ha u naxariistee Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Dowladda Puntland Marxuum Cabdisamad Cali Shire la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed,...
Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan oo lagu wado in ay...